သက်ဝေ: July 2010
အရှေ့အရပ်မှာ တောင်ညိုတန်းတို့၏ နောက်ကွယ်မှ တိုးထွက်လာသော လင်းလင်းလက်လက် နေရောင်ခြည်တွေကို လှမ်းမြင်နေရပြီ… ပင်လယ်ကမ်းစပ်က ရေလှိုင်းသံ တဝုန်းဝုန်းကတော့ တချက် တချက်မှာ ငြိမ်သက်… တချက်တချက် ပြင်းထန်… ပြီးတော့ ဟိုးခပ်ဝေးဝေး အုန်းပင်တန်းတွေဆီမှာ ငှက်ငယ် ပိစိတို့၏ မနက်ခင်းတေးသံ ကျီကျီကျာကျာ တွေကို ကြားနေရပြီ…။
ထိုသို့ဆိုလျှင် မကြာခင်အချိန်မှာ နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်စကားကို ဆိုကြရတော့မည်ပဲ… ပြီးတော့ ဝေးကွာ… ဝေးကွာ သွားကြရတော့မည်။ ဒီအချိန်မှာ နှစ်ဦးသား တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ အတွေးကိုယ်စီနှင့်… ဘာတွေ တွေးနေမိကြသည်လဲ…။
ကုန်ခဲ့သောနေ့ နေဝင်ချိန်တွေမှာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်က သဲသောင်ပြင်မှာ တပျော်တပါး ပြေးလွှားခဲ့ကြသော အချိန်များ အကြောင်းကိုလား…။ လှိုင်းတွေကြားမှာ ရေတွေစိုရွှဲ အေးစက်အောင် ဆော့ကစားခဲ့သော အချိန်များ အကြောင်းကိုလား…။ ကမ်းစပ်မှာ နှစ်ဦးသား အတူတူရွတ်ဆိုဖြစ်ခဲ့သော ကဗျာ တပိုင်းတစ ကိုလား…။ သဲပြင်ပေါ်မှာ အတူတူ ရေးဆွဲခဲ့ကြသော အပေါင်းလက္ခဏာ တခုနှင့် နာမည်စာလုံးလေးနှစ်ခု… မကြာခင်မှာ လှိုင်းတချက် ရိုက်ခတ်လိုက်သောအခါ ရေစီးထဲ မျောပါ ပျက်စီးသွားသော အကြောင်းကိုလား…။ ဒါကတော့ ဝမ်းနည်းစရာနော်…
သို့တည်းမဟုတ် ညနေစောင်း အိပ်တန်းတက် ငှက်ငယ်တို့၏ အသံတွေလို ဆူဆူညံညံ ရင်ခုန်သံတွေ အကြောင်း… အုန်းပင် အုန်းလက်တွေကို လေတိုးသော အသံများနှင့် ဆင်ဆင်တူသော အသက်ရှုသံတွေ အကြောင်း… လမိုက်ည မှောင်မှောင် ကြယ်ပွင့်တွေကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် လုယက် ရေတွက်ခဲ့သော ပျော်စရာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးလှသော အချိန်ပိုင်းလေး အကြောင်း… ပြီးတော့ ကြယ်လေး တပွင့် မျက်စေ့ရှေ့မှာ ကြွေကျသွားချိန်မှာ ပြိုင်တူ တောင်းခဲ့ကြသော ဆုတခု အကြောင်းတွေကို စဉ်းစား မြင်ယောင်နေကြတာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးသည်ပဲ…။ သေချာတာကတော့ ကုန်လွယ်လွန်းသော အချိန်တွေ အကြောင်းကတော့ မပါမဖြစ် အားလုံး၏ ရှေ့ဆုံးက ပါဝင်နေလိမ့်မည်။
ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်မှုတွေကို အသံ တခုခုဖြင့် ထိုးဖေါက်ပစ်လိုက်ချင်သော်လည်း အသံတွေသည် လည်ချောင်းဝမှ အပြင်ကို ရောက်မလာ…။ လက်ထဲမှာသာ တခုခုရှိနေလျှင် ထိုအရာကို ဟိုး… ရေပြင်ကျယ်ကြီးဆီသို့ လှမ်းပစ်လိုက်မိမည် ထင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ ရေသံတချို့နှင့်အတူ ဝဲဂယက်တွေထပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်တော့ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ သည့်ထက်ပို ပြင်းထန်လျှင် ရေစက်ရေပေါက် ရေမှုန်ရေမွှား တချို့ပင် လူကိုလာရောက် ထိမှန်နိုင်သေးသည်။ ထိုရေစက်တွေကများ နှစ်ဦးသားရင်ကို အေးမြနိုင်စေမည်လား… ရင်ထဲက အပူတွေကို ငြိမ်းအေးနိုင်မည်လား… အကြာကြီးအတွက် မဟုတ်တောင် တဒင်္ဂအဖို့တော့ အေးချမ်းသွားစေနိုင်မည် ထင်ပါသည်။ သိပ်တော့ မသေချာလှပါ…။
ထိုအတွေးစတွေနှင့် လက်တွေကို ပြန်ငုံ့ကြည့်မိသည်။ ဝေဝါးနေသော အမြင်အောက်တွင် ကိုယ့်လက်ချောင်းများကို ရုတ်တရက် ရှာမတွေ့နိုင်အောင်ပင် အသိစိတ်တို့နှင့် ဝေးကွာနေခဲ့သည်…။ အိုး… တွေ့ပြီ... နွေးထွေးသော သူ့လက်အစုံထဲမှာ ကိုယ့်လက်ချောင်း သေးသေးလေးတွေ နစ်ဝင် ပျောက်ဆုံးနေသည်ပဲ...
ဤလက်များကို အသုံးပြု၍ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို ဖြိုခွဲရန် မကြိုးစားချင်တော့ပါ…။ ထိုနွေးထွေးမှုတို့သည် ဝေးကွာသွားပြီးနောက် ပြန်မဆုံခင် အချိန်တွေအထိ နှလုံးသားထဲမှာ ထာဝရ တည်မြဲနေနိုင်ရန် တသက်စာ မှတ်သား နေလိုက်မိသည်…။ အဲဒီ အခိုက်အတန့်ကလေးမှာပဲ သူ ညက ရွတ်ဆိုခဲ့သော ကဗျာတပိုင်းတစကို နောက်တခေါက် တိုးတိတ်စွာ ထပ်မံ ရွတ်ဆိုလိုက်တာ…
ငါ ဂျူးတွေကို ဘယ်လိုမုန်းကြောင်း
ဆွဲ ယူ ရေတွက်
မင်းရဲ့ လက်တွေ နွေးထွေး
ကိုယ့်ရဲ့ သွေးတွေ ပြေးခုန်
တကယ်တော့ ကဗျာလေးက တပိုင်းတစနှင့် အဆုံးမသတ်ရသေး…
အဆုံးမသတ်ရသေး ဆိုတာထက် လောလောဆယ်မှာ အဆုံးသတ်ရန် အခွင့်အရေး မရှိသေး ဆိုလျှင် ပိုမှန်လိမ့်မည်…။ အခုအချိန်မှာတော့ တပိုင်းတစ ဒီကဗျာလေးကို ကာရန်လှလှ ရှာတွေ့ပြီး အမြန်ဆုံး အဆုံးသတ် ရေးသားနိုင်ခွင့်ကို နှစ်ဦးသား ဆုတောင်း မျှော်လင့် အိပ်မက် မက်နေကြရုံသာ…။
သို့သော် မပြီးဆုံးသေးသော ထိုတပိုင်းတစ ကဗျာလေးကပဲ ဝမ်းနည်းစရာတွေကြားက ဝေးကွာကြရမယ့် နေ့သစ်တွေအတွက် ခွန်အားများစွာ ပေးစွမ်းခဲ့ပြန်သည်။ သူရွတ်ပြသော ကဗျာလေးကို နားထောင်ကာ ကုန်ဆုံးလွယ်သော အချိန်များ အကြောင်းကို တွေးနေစဉ်မှာပင် ညက ကြယ်ကြွေချိန်မှာ တောင်းခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းလေးကို အချိန်တိုင်း ပြန်သတိရနေနော်… ဟု ဆိုကာ တဖြည်းဖြည်းချင်း… တဖြည်းဖြည်းချင်း… ကိုယ့်အနားမှ သူ တိုးတိတ် ညင်သာစွာ တရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွာသွားခဲ့တော့သည်…။
မှတ်ချက် ။ ။ ကဗျာလေးကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသော ကဗျာဆရာကို ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 11:20 PM 17 comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, အက်ဆေး
Night Festival (New World 2010)
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ည ၇ နာရီကနေ မနက် ၂ နာရီအထိ National Museum ရှေ့မှာ လုပ်တဲ့ စကာင်္ပူရဲ့ Night Festival 2010 ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ည ၁၁ နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ ၁၂ နာရီမှာ Paraboles 2.0 ဆိုတဲ့ ရှိုးရှိတယ်လို့ လက်ကမ်းကြော်ငြာ စာအုပ်လေးမှာ ရေးထားတာနဲ့ အချိန်နဲနဲ စောနေသေးလို့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ကြည့်နေရင်း National Museum ထဲ ဝင်သွားမိတယ်။ Museum က ဒီနှစ်ရက်စလုံး အတွက် Free Admission ပါတဲ့…။
အဲဒီ National Museum ကို ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီလူတန်းရှည်ကြီးနဲ့အတူ တခန်းဝင် တခန်းထွက် ရွေ့လျားပါသွားပြီး လိုက်ကြည့်မိပါတယ်။ လူတွေများနေတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ သိပ်မကောင်းပါ။ ပြတိုက်ထဲမှာ အနုပညာ ပြကွက်ဆိုပြီး တွေ့ခဲ့ရတာတွေကို မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် ဘာတွေပြနေမှန်းမသိတဲ့ အဖြူအမဲ ပိတ်ကား နှစ်ခု၊ ဆူဆူညံညံ သံစုံတီးဝိုင်းတခု၊ အောက်ကပုံမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း မျက်နှာကြက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ မီးဆိုင်း ရှစ်ခုက ရှေ့ထိုး နောက်ငင် လွှဲယမ်းနေကြတဲ့ ပြကွက်...
ပြီးတော့ အမှောင်ခန်းတွေမှာ ပြထားတဲ့ သူတို့အခေါ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ…
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဆိုလို့ ဘာတွေလဲ မှတ်တယ်… ကိုယ်တို့ဆီမှာ ဟိုးရှေးရှေးက သုံးတဲ့ အုန်းခြစ်တွေ၊ ကြွေရည်သုတ်ချိုင့် အရွယ်စုံ၊ ရေခဲခြစ် ခြစ်တဲ့ လက်လှည့်စက်၊ ငြုတ်ဆုံ အရွယ် အမျိုးမျိုး၊ ကြိမ်နဲ့ ယက်ထားတဲ့ စကော စကာ တောင်းပလုံးလေးတွေ၊ စင်းကားတံဆိပ် အပ်ချုပ်စက် နဲ့ ပုံစံ ဟောင်းဟောင်း ဒါးစက်၊ လမ်းမှာ ရေခဲမုန့်လည်ရောင်းတဲ့ ဆိုက်ကားလိုဟာမျိုးတွေကို တခုတ်တရ ပြထားကြတယ်။ ပြီးတော့ ဟိုးရှေးရှေးက ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ ကင်မရာ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ ကင်မရာတွေ၊ ပိတ်ကားကြီး ထောင်ပြီး ပြတဲ့ ရုပ်ရှင်ခေတ် က နာမည်ကြီး မင်းသား မင်းသမီးတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဟိုရှေးခေတ်က ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေနဲ့ အဝတ်အစား တချို့ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ တော်တော်များများတော့ ရိုက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးတော့ မတင်တော့ဘူးနော်… အဲဒီကို ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိကြမှာပါ။ ကိုယ်သာ တောသူမလိုပဲ အခုမှ ရောက်ဖူးပြီး အထူးတဆန်း ဖြစ်နေတာ…။
ဒါကတော့ ခါတိုင်းဆို အခုလို မှောင်မှောင် မဲမဲ ညမျိုးမှာ တွေ့ရင် ကြောက်လန့်ပြီး မျက်နှာလွှဲထားမိမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ အများသူငါတွေကလဲ ဓါတ်ပုံတွေ တဖျတ်ဖျတ် ရိုက်နေကြတာက တကြောင်း၊ ပိုစ့်လေး ရေးဖြစ်ရင် သုံးရအောင်ဆိုတာက တကြောင်းတို့ကြောင့် (ဇွတ်) ရဲဆေးတင်ပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ ခုံတန်းပေါ်မှာ (မျက်စေ့ပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့) ထိုင်နေကြတဲ့ အဲဒီလူတွေကို ရောင်စုံအဝတ်စတွေနဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။ Creative Art လို့ ဆိုကြတယ်…။
(မျက်စေ့ မျက်နှာ ပျက်နေကြသူများ)
အခုပြောပြချင်တာကတော့ သူတို့က Night Festival လို့ ကြွေးကြော်ပြီး လူတွေ အများကြီး လာကြည့်ကြတဲ့ စနေနေ့ ည ၁၂ နာရီမှာ ပြတဲ့ Paraboles 2.0 ဆိုတဲ့ ပြကွက်လေးကိုပါ။ ဒီပုံမှာ ကြည့်ပါ…။
(Paraboles 2.0 နှင့် ရွှေပွဲလာများ)
National Museum ရှေ့မှာ ပုံထဲမှာတွေ့ကြတဲ့အတိုင်း ဂြိုလ်တု စလောင်းလို အဝိုင်းပြားကြီး ၆ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ အဝိုင်းတွေကို အနောက်ဖက်ကနေ အတို အရှည် ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ တိုင်အကြီးကြီးတွေနဲ့ ထောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအဝိုင်းပြားတွေကလဲ အနေအထား အမျိုးမျိုး လှည့်လို့ ပြောင်းလို့ ရတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဝိုင်းပြားတွေရဲ့ အရှေ့ဖက် အလယ်ခေါင်ကနေ မီးရောင်စုံတွေလဲ လင်းပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ လမ်းမရဲ့ တဖက်ခြမ်းကနေ ဆလိုက်ထိုးပြီး အဲဒီ အဝိုင်းပြားတွေပေါ်မှာ အရုပ် ထင်စေပါတယ်။ အဝိုင်းပြားတွေရဲ့ အောက်ခြေမှာ တူရိယာ တမျိုးစီနဲ့ တီးနေ မှုတ်နေတဲ့သူ တွေရှိတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စင်အမြင့်တခုမှာ Conductor လို့ ခေါ်ရမယ့် အမျိုးသမီး တယောက်ရှိတယ်။ သူက အရှေ့ကနေ လက်ဟန် ခြေဟန်နဲ့ ပြနေတာကို အတီးသမားတွေက တီးနေကြတာမျိုး...။
ပြီးတော့ ဆလိုက်နဲ့ထိုးပြတဲ့ ပုံတွေက အာကာသက ကြယ်တွေ လတွေ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် အရောင်တွေ၊ အဆင်တွေနဲ့ မျက်စေ့ကို လှည့်စားတဲ့ အဝိုင်းတွေ အခွေ အလိပ်တွေ၊ ကယ်လီဒို စကုတ်တ် မှာကြည့်ရင် မြင်ရတဲ့ ပုံမျိုးတွေ၊ ရေဒီယို လှိုင်းတွေ၊ အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေနဲ့ ECG Graph လို လှိုင်းတွေ၊ ပြီးတော့ လက်ဗွေရာလို ပုံမျိုးတွေပါ။ ဒီမှာကြည့်ပါ...။
အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ ပုံကတော့ အဝိုင်းပြားတခုရဲ့ အလည်မှာ စတီးရောင် ပြောင်ပြောင် အလုံးတခုထည့်ထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက်က အဲဒီအလုံးထဲ ခြေထောက်တွေ ဒူးခေါင်းကျော်ကျော်လောက်အထိ ဝင်နေပြီး အဲဒီအလုံး ၃၆၀ ဒီဂရီနီးနီး လည်နေသ၍ သူကလဲ ပုံစံအနေအထား အမျိုးမျိုးနဲ့ အလိုက်သင့် လိုက်လည်နေတာပါ။ လက်နှစ်ဖက်လုံးကို လေထဲမှာ ဝှေ့ယမ်းပြီး မူးနောက်နေအောင် လည်နေရတာ အတော်မချောင်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ…။ တီးလုံးကလဲ ခြောက်ခြားစရာ အသံဆန်းဆန်းတွေ ဆူဆူညံညံတီး၊ သူကလဲ ရုန်းထွက်လို့မရတော့ ကူရာ ကယ်ရာမဲ့သလို လွင့်မျောရင်း သရုပ်ဆောင်… အဟဲ… ညကြီးမှောင်မှောင် ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ နဲနဲတောင် ကြောက်မိသေးတယ်…။
အော်… သူတို့ရဲ့ New World Night Festival ဆိုလို့ ဘာများပါလဲ လို့… ။ တကယ်ကတော့ ညကြီး ၁၂ နာရီမှာ လမ်းပိတ်ပြီး တီးလုံး ဆန်းဆန်းတွေတီးပြီး အရုပ် ဆန်းဆန်းတွေကို အဲဒီ အဝိုင်းပြားတွ အပေါ်မှာ မီးထိုးပြီး ပြတာပါပဲ...။ ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်က ရန်ကုန်မှာ ဘုရားပွဲတွေရှိရင် လမ်းလည်ခေါင် ပိတ်ကားကြီး ထောင်ပြီး မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကို ၃ ကား မိုးလင်း ပြသလိုပါပဲ၊ အခု ပိတ်ကားကတော့ အဝိုင်းတွေပေါ့... ဒါပါပဲ…။
အဲလိုအချိန်မတော်ကြီးမှာ လာကြည့်ကြတဲ့ လူတွေကလဲ အများကြီးမှ အများကြီးပဲ…။ အင်း… သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ကိုက်လဲ ကိုက်ပါတယ်လေ လို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒီလို လာကြည့်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ကင်မရာတွေ၊ ထရိုက်ပေါ့ထ်တွေနဲ့ ဝါသနာရှင်တွေကိုလဲ အများကြီး (အများကြီး) တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ထရိုင်ပေါ့ထ် ပါမသွားပါဘူး… ဒါကြောင့် ပုံကောင်းကောင်းတွေ မရခဲ့ပါ။ ပြီးတော့ ဝေးလဲ ဝေးပြီး တော်တော်လဲ မှောင်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကင်မရာက Built-in Flash က မနိုင်ပါဘူး…။ (ဒါ အကွက်ပဲ…)
အဲဒီပွဲပြီးတော့ ၁ နာရီ ကျော်ကျော်ရှိနေပြီ… ၂ နာရီပွဲကို စောင့်ရမှာ ညောင်းတာရော ပျင်းလဲ ပျင်းလာတာကြောင့် ပြန်လာခဲ့ကြတယ်…။ အပြန်လမ်းမှာ နဲနဲ အိပ်ငိုက်ချင်သလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို မျက်စေ့ကျယ်သွားစေခြင်း အလို့ငှာ (စကားမစပ် ဘာမစပ်နဲ့) နောက်ကို ညမှောင်မှောင်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် ကိုယ့်မှာ ဝယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတခု ထပ်တိုးလာပြန်ပြီ လို့ ပြောလိုက်မိပါသေးတယ်။
သို့သော် သူ မျက်စေ့ ကျယ် မကျယ်တော့ ကိုယ် မသိပါဘူး… ကိုယ်ကတော့ ဟို မျက်စေ့ပျက် မျက်နှာပျက် လူအရုပ်တွေရယ်၊ အလုံးထဲ ခြေထောက်စုံဝင်ပြီး လွင့်မျောနေတဲ့ စိတ္တဇ ဆန်ဆန် မိန်းမရယ်ကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ရကြောင်းပါ…။
Posted by သက်ဝေ at 9:00 PM 23 comments: Links to this post
အရောင်တွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ညနေခင်းတခုအတွက် အမှတ်တရပါ...
Posted by သက်ဝေ at 11:55 PM 24 comments: Links to this post
သူတို့ကို သတိထားမိသည်မှာ အတော်လေး ကြာခဲ့ပြီ။ ကြာဆို ဒီအိမ်ကို ပြောင်းလာကာစထဲကပင် ဖြစ်သည်။ အရင်အိမ်မှာတုန်းက သူတို့တွေကို တခါတလေတောင် မတွေ့ခဲ့ရဖူးပါ။ သည်အိမ်ကို ပြောင်းလာပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ အိမ်အဝင်ဝနားတွင် လှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့် စီတန်း လှည့်လည်သွားလာနေသော သူတို့တွေကို မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့လိုက်ရသည်။
သူတို့သည် တဦးချင်း တယောက်ချင်း၏ အရွယ်အစားအားဖြင့် သေးကွေးသလောက် စုပေါင်းလိုက်လျှင် ခွန်အား ကြီးထွားလာကြသူများ ဖြစ်သည်။ မြင်ရ တွေ့ရသလောက် အချင်းချင်း စည်းလုံး ညီညွတ်မှု ရှိကြသည်။ ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် တနေရာမှ တနေရာသို့ ညီညီညာညာ စီတန်းသွားလာတတ်ကြသည်။ တဦး တယောက်၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို အများစုက ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံ ကျင့်သုံးသည် (ဟု ထင်ရသည်)။ တယောက် အားနှင့် မရသည်ကို စုပေါင်းအားနှင့် ဆောင်ရွက်တတ်ကြသည်။
ကိုယ်သည် အင်းဆက်ဆိုလျှင် မည်သည့် အင်းဆက်မျိုးကိုမဆို သေမတတ် ကြောက်ရွံ့သူတယောက် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သည်အသေး အကွေးကောင်လေးများကိုတော့ ကြောက်သော်လည်း သူတို့၏ အရွယ်အစားကိုကြည့်ရင်း သနား ကြင်နာသော စိတ်ကလေး အနည်းငယ် ဝင်လာသောကြောင့် အရမ်းကာရော မနှိမ်နင်းချင်။ သည်အတိုင်းသာ ကြည့်နေလိုက်မိသည်။ လွန်လွန်ကဲကဲတွေ ဖြစ်မလာလျှင် တော်လှပြီဟု တွေးထားသည်။ သူတို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ငုံ့ကြည့်ပြီး နင်တို့ ဒီအိမ်မှာ နေချင်ရင် ကောင်းကောင်းနေ လိမ်လိမ်မာမာနေကြ၊ ငါ့ကို ဒုက္ခမပေးကြရင် နင်တို့ကိုလဲ ငါ ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဟူ၍ စိတ်ထဲကနေ ခပ်တိုးတိုး ပြောမိသည်။
သူတို့ ဆိုသည်မှာ အရောင် နီကျင်ကျင်နှင့် ပုရွက်ဆိတ်ကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။
သို့သော် သူတို့သည် ကိုယ့်ပြောစကားကို နဲနဲမှ အလေးမထား၊ နားမထောင်ကြပါ။ သူတို့သည် တအိမ်လုံး နေရာအနှံ့ လျှောက်သွားကြသည်။ ထမင်းစားပွဲနားသို့လဲ လာကြသည်။ မီးဖိုအနားမှာလဲ ဘာပဲ ချထား ချထား ရစ်သီ ရစ်သီ လုပ်တတ်ကြသည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုယ်စားနေကျ သကြားလုံးများ ချောကလက်များ ထည့်ထားသောဗူးနှင့် အာလူးကြော်ထုပ်များကို အပိုင်စီးကြခြင်းပင်။ သူတို့ကို မနှစ်သက်သော ကိုယ်သည် ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှိမ်နင်းရန်လဲ အမှန်တကယ် သတ္တိမရှိခဲ့ပါ။ ပြီးတော့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေကြေပျက်စီးကြခြင်းကိုလဲ နဲနဲမှ မလိုလားသောကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ကွင်း ဖယ်ရှားကာ သည်းခံနေခဲ့သည်။ သူတို့ကို ကိုယ်ပေးခဲ့သော အပြင်းဆုံး အပြစ်ဒါဏ်မှာ လေနှင့် မှုတ်ထုတ် ဖယ်ရှားခြင်းမျှသာ။
သို့သော် ညနေခင်းတခုမှာ သူတို့အားလုံးကို နာကျည်းမုန်းတီးမိပြီး မေတ္တာထားမရစေသော အကြောင်းတခု ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုနေ့က သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့် ဖုန်းပြောအပြီးမှာ ဖုန်းကို ထမင်းစားပွဲပေါ်တွင် ချထားခဲ့မိသည်။ အနားမှာ စားလက်စ ကျောက်ကျော တပန်းကန်လဲ ရှိနေသေးသည်။ တိုတိုပြောရလျှင် ထိုကျောက်ကျောကို သူတို့ လာစားကြသည်။ သည်လောက်နှင့်ဆို ကိုယ် ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါသေးသည်။ သို့သော် ထိုမှတဆင့် ကိုယ်မသိလိုက်ခင်မှာ ကျောက်ကျောပန်းကန်အနီးမှာ ချထားသော ဖုန်းကို လာတက်ပြီး လေ့လာကြသည်။ အဆိုးဆုံးက နောက်တကြိမ် ဖုန်းမြည်လာသောကြောင့် ထိုဖုန်းကို နားဖြင့်ကပ်ကာ ပြောအပြီးမှာ… ... ...
ဖုန်းနံပါတ် မှားခေါ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် စုစုပေါင်း တမိနစ်ပြည့်အောင် မပြောဖြစ်လိုက်ပါ။ သို့သော် ဖုန်းချအပြီး နားထဲမှာ တစီစီ မြည်သံတွေ ကြားနေရသလိုလို... ယားကျိကျိ ဖြစ်လာသလိုလို...။ အား…. တစုံတခုသော အသိကြောင့် မှန်ရှေ့သို့ အမြန်ပြေးကြည့်လိုက်ရာ ကိုယ့် နားရွက် အနီး အနားတဝိုက်မှာ သူတို့တွေကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ တချို့က နားရွက် အဝမှာ… ဒါဆို သေချာနေပြီ… သူတို့တွေထဲက တချို့က နားရွက်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်မှာ သေချာနေပြီ။
ထိုတခဏမှာ နားထဲမှ အသံမျိုးစုံ ကြားလာရတာ… တဒုန်းဒုန်းနဲ့ လှမ်းလျှောက်နေသော ခြေသံတွေ၊ အားရပါးရ ရယ်မောသံတွေ၊ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ခပ်ကျိတ်ကျိတ် ရယ်မောသံတွေ၊ တခါတခါမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်ဟစ်လိုက်သော အသံတွေ၊ တခုခုကို လွှဖြင့် ပွတ်တိုက်ဆွဲနေသလို တဂျစ်ဂျစ် မြည်သံတွေ၊ တခုခုကို လှုပ်ခါယမ်းနေသော ကလောက် ကလောက် မြည်သံတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို တရွတ်တိုက် တွန်းရွှေ့သံတွေ၊ ပြီးတော့ တစစ်စစ် ကိုက်ခဲလာသလိုလို ခံစားမှုတခု… သေချာနေပါပြီ။ သူတို့တွေ နားထဲက တခုခုကိုတော့ ကိုက်ဖြတ်နေကြပြီ။ နားစည်ကို ကိုက်ဖြတ်နေကြတာလား… ဒါဆို မကြာခင် ကိုယ် နားမကြားသူတယောက် ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ နားစည်မှာ အပေါက်သေးသေးလေး ဖြစ်သွားရင်တောင် အကြားအာရုံတွေက ၂၀ ကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားတတ်သတဲ့။ ပြီးတော့ နားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သဘာဝကပေးထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေလဲ သူတို့တွေ ဟိုရွှေ့သည်ပြောင်းလုပ်နေတာ အခုလောက်ဆို နေရာထိုင်ခင်း အထားအသိုတွေ မှားယွင်းကုန်လောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့…။
ထိုမျှနှင့် မပြီး… မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဆက်ကာ ဆက်ကာ စဉ်းစားမိသည်။ ထိုသတ္တဝါလေးတွေသည် နားထဲမှ တဆင့် ဦးနှောက်ဆီသို့ ဆက်လက်ကူးသန်း သွားနေကြပြီလား… ပိန်ပါး သေးကွေးကာ ပေါ့ပါးလှသော သူတို့တွေသည် သွေးကြောတွေ အာရုံကြောတွေ နာ့ဗ်ကြောတွေမှတဆင့် နေရာအနှံ့အပြားကို ဥဒဟို ကူးသန်း သွားလာနေကြလောက်ပြီ…။ ဘုရား… ဘုရား… ခေါင်းနဘမ်းတွေ အတော်ကြီးလာသည်။ ချက်ချင်းပဲ ခေါင်းတွေက တစစ်စစ် ထိုးကိုက်လာကြသည်။ ထိုအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့တွေ ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ဦးနှောက်ထဲ ရောက်ကုန်ကြတာ သေချာသလောက် ရှိနေပြီ။ ကြောက်အား လန့်အားနှင့် မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်ချလိုက်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မျက်စေ့ထဲမှာလဲ ခိုးလိုးခုလုနှင့်… ထိုအခါ မရဲတရဲနှင့် မျက်စေ့ကိုဖွင့်… ကြည့်မှန်ရှေ့ကိုသွား…။ အားးးးး ကိုယ့်မျက်စေ့ဘေးနားမှာ တရွရွသွားနေသော အသေးကောင် တကောင်… သူက ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ…။ သေချာတာကတော့ နားထဲမှ ဝင်ပြီး မျက်စေ့ထဲမှ ပြန်ထွက်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ရမည်။ သွားပြီ… သွားပြီ…။ သူတို့တွေ လုပ်နေပုံနှင့် ကိုယ့်ဘဝတော့ ရစရာမရှိ၊ တတိတိနှင့် ဆုံးပါးတော့မည်။ အလွယ်တကူ အသက်မပျောက်နိုင်သော်လည်း အနည်းဆုံး အကြားအာရုံ အမြင်အာရုံတွေ ချို့ယွင်းကာ လူစဉ်မမှီ ဖြစ်သွားနိုင်သည်ပဲ။
စောစောက ပြာလဲ့လဲ့ ညနေခင်းသည် ယခုအခါ မှောင်မိုက်သော ညအဖြစ်သို့ အသွင် ကူးပြောင်းသွားပြီ။ မကြာခင် ကိုယ့်ဆီမှာလဲ အလားတူ မှောင်မိုက်သော အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ဧည့်ခန်းထဲမှ ဆိုဖါပေါ်တွင် မလှုပ်မယှက် ထိုင်နေရင်း တခုခုကို တိတ်တဆိတ် စောင့်ဆိုင်းနေမိသည်။ တယောက်တည်း ဤသို့ ငြိမ်တွေနေသည်မှာ အချိန်အားဖြင့် မည်ရွေ့မည်မျှ ကြာသွားသည် မသိ…။ ကိုယ် သိလိုက်သောအချိန်မှာ မျက်စေ့ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ အပြင်ဖက်တွင် နေရောင်တွေ အလင်းရောင်တွေ နှင့် မိုးစင်စင်လင်းနေပြီ။
ကိုယ် အိပ်ပျော်သွားတာပါလား…။ မအိပ်ခင်က အဖြစ်အပျက်ကို ချက်ချင်း သတိရသွားသည်။ သတိရရချင်း နား အကြားအာရုံကို သတိထားမိသည်။ အခန်းထဲမှ ရေဒီယိုသံ ခပ်တိုးသဲ့သဲ့ကို ကြားနေရသည်ပဲ။ စူးစူးစိုက်စိုက် နားထောင်ကြည့်မိသည်… တိုးသဲ့သော်လည်း ပီပီသသ ကြားနေရသည်က ကိုယ်အလွန်နှစ်သက်သော Celine Dion ၏ Because you Loved me သီချင်းသံ…။ ပြီးတော့ အိမ်အပြင်ဖက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ တိမ်ပြာပြာတွေကြားမှာ ဟိုဟို ဒီဒီ လူးလာ ပျံသန်းနေကြသော အရောင်စုံ ငှက်ငယ်ပိစိလေးများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သည်သို့ဆိုလျှင် ကိုယ့်ရဲ့ အကြားအာရုံ အမြင်အာရုံတွေ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေသေးသည်ပဲ။ ကိုယ် ဝမ်းသာသွားသည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိ။
သည့်နောက်တွင်မတော့ မနက်ခင်း၏ လတ်ဆတ်သော လေကို တဝကြီး ရှုရှိုက်ကာ မရောက်ဖူးသော နေရာ အသစ်တခုကို ရောက်နေသူတယောက်ပမာ တအိမ်လုံး ဟိုလျှောက် သည်လျှောက် နေရာအနှံ့ လျှောက်ကြည့်မိသည်။ ဘယ်နေရာမှာများ သူတို့တွေကို တွေ့ရအုံးမလဲဟု မရဲတရဲ ရှာဖွေကြည့်မိသေးသည်။ သည်တခါ သူတို့တွေကို တွေ့လိုက်လျှင် အရင်ကလို မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ လက်ပိုက် ကြည့်နေမိမည်လား… သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် တခုခု လုပ်ဖြစ်မည်လား… သိပ်တော့ မသေချာလှပါ။ သေချာတာတခုကတော့ အရွယ်အစား သေးငယ်သော်လည်း အစွမ်းထက်လှသော သူတို့တွေကို ကိုယ် အရင်ကထက် ပို၍ ကြောက်ရွံ့သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အမှန်ကတော့ သူတို့တွေသည် ကိုယ့်အသားကို ကိုက်သွားခြင်း မဟုတ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုက်သွားခြင်းသာ…။ အသားကို ကိုက်လိုက်လျှင် တခဏသာ နာကျင်မည်ဖြစ်သော်လည်း စိတ်ကို ကိုက်သွားသောအခါ အချိန် အတော်ကြာကြာအထိ ခံစား နာကျင်နေအုံးမှာ ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ညနေဈေးသွားဝယ်ရန် ရေးမှတ်ထားသည့် ဈေးစာရင်းထဲတွင် ပုရွက်ဆိတ် နိုင်သော ဆေးဗူး တဗူးကို နောက်တိုး စာရင်းအဖြစ် ဖြည့်စွက် ရေးသားထား လိုက်မိသည်။ အနည်းဆုံးတော့ အရေးကြုံလျှင် သုံးနိုင်ရင် အဆင်သင့် ဆောင်ထားသော် မမှားနိုင် ဟု ထင်မြင်ယူဆ မိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤပိုစ့်အတွက် ပုရွက်ဆိတ်ပုံလေး ချက်ချင်းရေးဆွဲပေးခဲ့သော ပန်ပန့်ကို ချစ်ခင်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အတူတူ ဖတ်စရာ - ခြားနားခြင်း
Posted by သက်ဝေ at 10:30 PM 32 comments: Links to this post
Labels: Thoughts, ဝတ္ထုတို
ကိုယ်အားပေးသော အင်္ဂလန်၊ ဘရာဇီးလ်၊ အာဂျင်တီးနား၊ အီတလီ စသည့် အသင်းကြီးတွေ တသင်းပြီး တသင်း ထွက်ကုန်ပြီး ကိုယ် သိပ်မနှစ်သက်လှသော အသင်းတွေသာ ကျန်နေခဲ့သောကြောင့် ကြည့်ရတာ အားမရလှ။ အင်း… ရှိပါစေတော့လေ… ကိုယ်တိုင်လဲ ဝင်မှ မကန်နိုင်တာ… ။ သည်နှစ်ပွဲမှာ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရ ဖြစ်စေသော အကြောင်းတခုကတော့ ကိုယ့်လို ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့် မျက်နှာစာအုပ်မှာ အတူ ဝေဖန်ရင်း လေကန်ရင်း ဘောလုံးပွဲတွေ ကြည့်ခဲ့ရခြင်းပင်။ အမှန်တကယ်ကို အမှတ်တရနှင့် အလွန် ပျော်စရာကောင်းခဲ့သည်။
ပြောပြရရင် ယုံမယ်မထင်... ဘောလုံးပွဲကို မျက်နှာစာအုပ်နှင့် အတူတူ ကြည့်ရှုအားပေးသူများအနက် အများစု (အများစု) မှာ မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ် ရောက်နေကြသည် မသိ…။ (တကယ် မသိပါ… ကာယကံရှင်များနှင့် သိသူများ ပြောပြကြပါရန်…)
ဘောလုံးပွဲ မစခင် ညဦးပိုင်းတွေမှာ တယောက်ကို တယောက် ကြည့်မယ် မကြည့်ဖူး သတိပေး သတင်းမေးကြသည်။ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း အပျင်းပြေ အိပ်ချင်ပြေ စားစရာ အစားအသောက်လေးများ စီစဉ်ပြီး မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်တွင် (မစားရ ဝခမန်း) မျှဝေ ကျွေးမွေးကြသည်။ မနက်စောစော နှစ်နာရီခွဲပွဲတွေမှာ တယောက်ကို တယောက် နိုးပလားဟေ့ ဟု လှမ်းမေးကြသည်။ ပြီးတော့ ဘောလုံးပွဲကို သဲသဲမဲမဲ ကြည့်နေရတာက တဖက်၊ အိပ်ချင်ပြေ စားစရာ သောက်စရာတွေ စားနေ သောက်နေရတာက တဖက်၊ ပြီးတော့ လက်ထဲမှ ဖုန်းဖြင့် (အလွယ်တကူ) Twitter က တဆင့် Status Update လုပ်ရတာက တမျိုး၊ ပထမပိုင်းအပြီး အားလပ်ချိန်များမှာ မိမိ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ မကျေနပ်ချက်များကို မျက်နှာစာအုပ်မှာ ကော်မန့်တွေရေးပြီး ပေါက်ကွဲရသည်က တဖုံ၊ ပွဲပြီးသွားချိန်များ၊ နောက်တနေ့ မနက်တွေမှာလဲ မိမိတို့ စိတ်ထဲ ကျန်ရှိနေသေးသည်များကို အခဲမကြေနိုင်သေးပဲ အပြန်အလှန် ပြောကြ ဆိုကြနှင့်… ညကြီးအချိန်မတော်မှာ ကိုယ့်တွေထက် အလုပ်များသူတွေ ရှိနိုင်မည် မထင်။ အဲဒီဘောလုံးပွဲတွေက တလထဲ မို့သာပဲ... နှစ်လလောက်ဆိုရင် လူတွေလဲ ရူးကြောင် မူးကြောင် ဖြစ်သွားနိုင်သည်...။
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဒါတွေတင်မက… နောက်တနေ့ အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ရုံးကိုရောက်… အားပေးသော အသင်းချင်း မတူသော လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့်လည်း အငြင်းပွားရင်း ရန်လုပ်ရသေးသည်။ KFC ကျွေးကြေး အလောင်းအစား ပြုကြသေးသည်။ ဆိုးသည်ဟု ဆိုချင်ဆို… ဂျာမဏီကိုတော့ နဲနဲလေးမှ မေတ္တာမရှိ။ သူတို့ အသင်းက ဘောလုံးကန် ကောင်းသော်လည်း အလိုလိုနေရင်း အကြောင်းမဲ့ အသားလွတ် ဂျာမဏီကို မုန်းသောသူထဲမှာ ကိုယ်က ထိပ်ဆုံးက…။ သူကလွဲလျှင် ဘယ်သူနိုင်နိုင် ဟု သဘောထားသည်။ ရုံးမှ ဂျာမဏီကို အမာခံ အားပေးသူတယောက်နှင့်ဆို အချိန်ရသ၍ ရန်ဖြစ်နေမိသည်။ သူ ဂျာမဏီအသင်း၏ အမှတ်တံဆိပ်ပါသော ဘောလုံးအင်္ကျီ ဝတ်လာသောနေ့က လုံးဝကို အခေါ်အပြော မလုပ်ဖြစ်…။ ဂျာမဏီအသင်း ပြုတ်သွားပြီးမှ သနားပါတယ်… တတိယနေရာလောက်ကတော့ ပေးလိုက်ပါ့မယ်လေ ဟု တွေးကာ ပြန်ခေါ်လိုက်သည်…။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်စေကာမူ သည်နှစ်အတွက် ကိုယ့်အကြိုက် အသင်းများ မနိုင်သော်လည်း ဟော်လန်နှင့်စာလျှင် စပိန်အသင်း နိုင်သည်ကို ဝမ်းသာမိသည်။ အရေးထဲ ခြေကားယား လက်ကားယား ရေဘဝဲကောင်လေးကလဲ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသေးသည်…။ သူလေးကို မေတ္တာထားကြသူများကလဲ အများသား… ကံကောင်းထောက်မ၍ ခုထိတော့ ဘာဘီကျူး ရေဘဝဲ မဖြစ်သေး…။ ကိုယ်သာ ဘောလုံးသမားဆိုလျှင်လည်း မကန်ရသေးခင် ကိုယ့်ကို နိုင်မည် ရှုံးမည်ဟု ဦးဦးဖျားဖျား ကြိုတင် နမိတ်ဖတ်နေသော သည်အကောင်ကို အမှုန့်ခြေချင်မည်မှာ မလွဲ…။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ အကောင်လေး…
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကြီး သည်တချီတော့ ပြီးသွားခဲ့လေပြီ။ အသင်းလိုက်ကို သော်လည်းကောင်း၊ ဘောလုံးသမားများ တယောက်ချင်းစီကို သော်လည်းကောင်း ကန်သူမသိတဲ့ အချစ်တွေနှင့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အားပေးခဲ့ပြီးပြီ။ နောက် လေးနှစ်အကြာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကြီးကို ၂၀၁၄ မှာ ဘရာဇီးမှာ ကျင်းပမည်တဲ့…။ ဝါသနာ မပါရှာပုံကတော့ အချိန်တွေ ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ရုံးချိန်တွေ ဖြစ်နေလျှင် ကြည့်ရခက်နေမယ်လေဟု ဆိုကာ ဘရာဇီး နှင့် စကာင်္ပူ အချိန်ကွာခြားချက်ကို ရှာဖွေကာ တွက်ချက် ကြည့်လိုက်မိသေးသည်။ သူတို့က စလုံးထက် ၁၁ နာရီ တိတိ နောက်ကျသည်။ နေ့နဲ့ ည ပြောင်းပြန်နီးပါးပင်…။ သည်တော့ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေလောက်သည်…။
အဲဒီ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ကျရင်လဲ ဝါသနာတူ ဒီသူငယ်ချင်း ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုပဲ လူစုံ တက်စုံ အတူတကွ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကြည့်နိုင်ကြစေရန် ဆုတောင်းမိပါသည်။ တို့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြပါစို့…။
မှတ်ချက် ။ ။ ဘောလုံးပွဲ အမှတ်တရ နှင့် အမာခံ ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများအတွက် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုစကားကို ဒီမှာ လဲ ဖတ်ကြည့်နိုင်သေးသည်။
Posted by သက်ဝေ at 4:40 PM 24 comments: Links to this post
ဒီရက်ပိုင်းမှာ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ ချစ်စရာ သီချင်းလေး တပုဒ်ပါ…။
Boys Like Girls အဖွဲ့က သီဆိုထားတဲ့ Two is better than One တဲ့…
You came into my life, And I thought hey
You know this could be something…
And now I'm left with nothing…
Cause maybe it's true, that I can't live without you
Well.. maybe two is better than one
And I'm thinking two, is better than one…
You make it hard for breathing…
And finally now, we're leaving…
Maybe two is better than one…
And I'm thinking…
Oooh I can't live without you…
Cause baby two is better than one…
And I've figured out with all that's said and done…
Two… is better than one…
ဒီသီချင်းလေးကို ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့က ကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း မဆွီတီတို့ ဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ ၁၂ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် နဲ့ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်ကြည်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ရဲ့ ၁၀ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် အတွက် အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ပါတယ်…။ ပျော်စရာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ရက်များမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း တရာတိုင် ခိုင်မြဲစွာ ရွှေလက်တွဲနိုင်စေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ ကိုယ် တက်ဂ်လုပ်လိုက်တဲ့ အသွင်တူ၏ မတူ၏ ပိုစ့်ကို ချစ်ခင်စွာ ရေးပေးကြတဲ့ အသွင်တူကြသော စုံတွဲများ၊ အသွင်မတူကြသော်လည်း စိတ်တူ ကိုယ်တူ ချစ်ခင် ကြည်ဖြူကြသော ဇနီးမောင်နှံ စုံတွဲများ နဲ့ လာလတ္တံ့သော အသွင်တူ စုံတွဲများ၊ ထူးထူးခြားခြား ပုံပြင်ထဲက စုံတွဲများအတွက် ကျေးဇူးတင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ပါတယ်…။ အဲဒီပိုစ့်ကို မရေးရသေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ဒီပိတ်ရက်တွေမှာ ရေးဖြစ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ် ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး…။
အဲ… တခုတော့ မှာလိုက်မယ်နော်… သက်ဝေက ပြောနေတယ်…။
Two is better than One ဆိုလို့ နှစ်ယောက်ရှိမှ ကောင်းမတဲ့ ဟဲ့… ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေ တလွဲကောက်ပြီး နောက်တယောက်၊ နောက်တယောက်တွေတော့ ထပ်မရှာကြနဲ့အုံးနော်… သက်ဝေ တရားခံဖြစ်ပြီး ပြေးပေါက်တွေ မှားနေပါအုံးမယ်…။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော သောကြာနေ့ အားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါစေ…။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ဖို့ မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ ညီမ ငယ်လေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by သက်ဝေ at 12:20 PM 12 comments: Links to this post
Labels: ဆုတောင်း, သီချင်း
ချစ်လို့ တက်ဂ်တဲ့ ပိုစ့်
ပြီးခဲ့တဲ့ ပိုစ့် အသွင်တူ၏ မတူ၏ ကို စရေးမိတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဒီပိုစ့်ကို တက်ဂ်ပိုစ့်လေး လုပ်ရရင် ကောင်းမှာလို့ တွေးနေတာပါ။ ကိုယ့် ရေးဖေါ်ရေးဖက်တွေထဲမှာ ချစ်ခင်ပြီး သာယာပျော်ရွှင် အောင်မြင်တဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝလေးတွေ၊ မိသားစုဘဝလေးတွေ ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်နေကြသူတွေကလဲ (ကိုယ်သိသလောက်တော့) အများသားလား…။ ဒီလိုလေး တက်ဂ်လိုက်ရင်တော့ဖြင့် တယောက်နဲ့ တယောက် အမူ အကျင့် အသွင်အပြင် တူတဲ့ လက်တွဲဖေါ်လေးတွေကို တွေ့ရနိုင်သလို တယောက်နဲ့ တယောက် ဓလေ့စရိုက်လေးတွေ၊ အကြိုက်လေးတွေ မတူညီတဲ့ လက်တွဲဖေါ်တွေကျပြန်တော့လဲ အချင်းချင်း ဘယ်လို ညှိနှိုင်းကြတယ်၊ ဘယ်လို နားလည်မှုထားကြတယ်၊ ဘယ်လို လိုက်လျောကြတယ် ဆိုတာလေးတွေကို တွေ့ရမှာ သေချာတယ်လို့ တကယ် တွေးနေမိတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်က စလို့ တခါမှ တက်ဂ်ပိုစ့် မရေးဖူးတာက တကြောင်း၊ ကောင်းပါ့မလား… သူတို့တွေ ရေးပေးချင်ကြပါ့မလား… စသည်ဖြင့် ပူပန်နေတာက တကြောင်းတို့ကြောင့် ညက ပိုစ့်ကို ဒီတိုင်းပဲ တင်လိုက်မိပါတယ်။
ဒီညနေတော့ အမ မခင်မင်းဇော် က မျက်နှာစာအုပ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Link အောက်မှာ “ဖတ်ပြီးပြီ... အဲဒါကို တက်ဂ်ပါလား သက်ဝေ ညီမရ...” လို့ ပြောလာတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူးတွေ ပိုမို ခိုင်မာလာပြီး ဒီ အသွင်တူ၏ မတူ၏ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာရေးဖေါ်တွေကို တက်ဂ်ပါတော့မယ်…။
ဒီဘလော့ဂ် စာမျက်နှာတွေပေါ်ကို ကိုယ် ရောက်လာခဲ့တာ အချိန်ကာလအားဖြင့် နှစ် နှစ်ကျော် သုံး နှစ် နီးနီး ရှိခဲ့ပြီမို့ ခင်မင် ရင်းနှီးပြီး သံယောဇဉ်ဖြစ်နေရတဲ့ သူတွေ အတော်ကြီးကို များနေပါပြီ။ ဒီတော့ တယောက်ယောက်ကိုများ မတက်ဂ်မိပဲ ကျန်နေခဲ့ရင် မချစ်သလိုတွေ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အားလုံးကို မကျန်ခဲ့ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး တက်ဂ်ပါ့မယ်။ ရေးပေးချင်တဲ့ စိတ်လေးတွေ ရှိမယ်၊ ရေးလဲ ရေးပေးကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အချိန်မရလို့ မအားမလပ်လို့ ရေးမပေးနိုင်သေးရင်လဲ ရပါတယ်။ အချိန်ရတော့ ရေးကြတာပေါ့…။ ဘာမှ serious မဟုတ်ပါဘူး၊ အားလုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး စပြီး တက်ဂ်ချင်တာကတော့ ချစ်စရာ မိသားစုလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာဘဝလေးတွေ ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ အမ မခင်မင်းဇော် နဲ့ ဆရာမ မမေငြိမ်း ကိုပါ။ ဆရာမ မမေငြိမ်းကို ရေးပေးဖို့ အမ မခင်မင်းဇော်က ကူပြောပေးပါနော်…
ပြီးတော့ တခါတခါမှာ သူ့အမျိုးသား KMSL အကြောင်းလေးတွေကို ချစ်စဖွယ် စီကာပတ်ကုံး ရေးတတ်တဲ့ ချစ်မမ မခင်ဦးမေ ကိုလဲ တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ မမက ရေးပေးမယ် မဟုတ်လား ဟင်…
အခုတဖန် အလှည့်ကျလာသူများကတော့ အတွေးကောင်းသလို အရေးလဲ ကောင်းတဲ့ ချစ်ညီမ ပန်ပန် နဲ့ မကေ ပါ။ တက်ဂ်တယ်နော်… မြန်မြန်ရေးပေးရမယ်နော် လို့လဲ တဆက်တည်း နားပူလိုက်ပါတယ်…။
နောက်တဖွဲ့ကတော့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသက်တမ်းတလျှောက်လုံး ရင်းနှီး ချစ်ခင်ခဲ့ကြပြီး အခုထိလဲ ဒီဘလော့ဂ် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဆုံတွေ့နေကြရတဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းတွေ… တန်ခူး ၊ တီတီဆွိ ၊ စုချစ်သူ ၊ မသီတာ ၊ သင်းနွယ်ဇင် နဲ့ သိင်္ဂီနွယ် တို့ပါ။ (အလုပ်များလို့ ဆိုပြီး ဆင်ခြေတွေ မလာနဲ့နော်… စိတ်ဆိုးပလိုက်မှာ…)
ပြီးတော့ စာရေးအား သိပ်ကောင်းတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ချစ်ကြည် …။ (ညတွင်းချင်းရေးပေးမယ် မဟုတ်လား ဟင်…)
နောက်တဖွဲ့ကတော့ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့ ညီမတွေ အဖွဲ့ပါ။
ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ဖို့ အစဖေါ်ပေးခဲ့တဲ့ ညီမ ချိုသင်း နဲ့ မေ (မေက မျက်နှာစာအုပ်မှာ ရေးပေးပါ)
ပြီးတော့ ညီမ စင်စင် (ခေါ်) ဂွမ်းပုံ (ခေါ်) ဆင်ဆင် (မျက်နှာစာအုပ်မှာ ရေးပေးပါ)
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရယ်စရာ ကော်မန့်လာရေးသွားတဲ့ ညီမ မွန် (သုနှင်းဆီ)၊
ညီမ အပြုံးပန်း ၊ မငယ်နိုင် နဲ့ မျက်နှာစာအုပ်မှာ ဟင်းလှလှလေးတွေ ချက်တတ်တဲ့ ညီမ Vista ၊ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ညီမ မေလေး (မျက်နှာစာအုပ်မှာ ရေးပေးပါ)၊ ပြီးတော့ ညီမ ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ နဲ့ ညီမ ပွင့်မြုးဇင် ...
ငယ်သေးလို့ ကျန်နေခဲ့တဲ့ မအယ် ကလဲ ချစ်ရင် ရေးပေးပါနော်...
စာမရေးတာကြာ မတွေ့ရတာ အရမ်း ကြာလှပြီး ထူးထူးခြားခြား ဒီနေ့မှာ ကိုယ့်ဆီ အလည်ရောက်လာတဲ့ ညီမ မီယာ
ချစ်စရာ သမီးလေးတွေရဲ့ မေမေတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ညီမငယ် နုစံ ၊ ညီမ ခွန်မြလှိုင် နဲ့
သမီးလေး စာမေးပွဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ် မရရင် ပညာပေးအစီအစဉ် ကျင်းပမယ့် ဆိုးတဲ့ အမျိုး ချစ်ပေါက် ...
သူတို့အားလုံး ဆီက မတူညီတဲ့ အမြင်လေးတွေကို သိခွင့်ရဖို့ ချစ်ခင်စွာနဲ့ တက်ဂ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေ ရင်ပေါင်တန်းနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မျှမျှတတဖြစ်စေချင်တဲ့ ကိုယ့်ဆန္ဒအရ အမျိုးသား ဘလော့ဂ်ဂါ တချို့ကိုလဲ အမှတ်တရ တက်ဂ်ပါ့မယ်။ အိမ်ထောင်တခုမှာ အသွင်တူ၏ မတူ၏ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားတွေဖက်က အမြင်တွေကလဲ တကယ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့် ယုံကြည်ပါတယ်။ (ယုံကြည်နေပါတယ်)
ဒီတော့ ကိုယ်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး ကိုလူသစ် ၊ ကိုပေါ နဲ့ ကိုကိုဒီဘီ တို့ကို ရေးပေးဖို့ တက်ဂ်ပါရစေ။ (ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်ပါက မဒမ်များ ထံမှ အကြံဥာဏ်များ ရယူပါရန်…)
ပြီးတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဗဟုသုတတွေ အလွန်များတဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ ကိုကြီးကျောက် ကိုလဲ သူ့ဆီက ဘာလေးများ ထူးထူးခြားခြားလေး ကြားရလေမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တက်ဂ်ပါတယ်...။
တကယ်တော့ ဒီပိုစ့်က အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူမှ ရေးလို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လောလောဆယ်မှာ အိမ်ထောင်မရှိသေးသော်လည်း ရည်ရွယ်သူရှိနေကြပြီး မကြာခင်မှာ ဘဝကို စကြမယ့် သူတွေလဲ ရေးလို့တာ သေချာပါတယ်။ (သိပ်သေချာပါတယ်…)
လူတိုင်းဟာ အိမ်ထောင်တခု ထူထောင်ရာမှာ တွေ့ကြုံလာရမယ့် ဘဝခရီးဖော် အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့ အသွင်တူခြင်း မတူခြင်းတွေ၊ အကြိုက် တူခြင်း မတူခြင်းတွေ အတွက် ဘယ်လို ညှိနှိုင်းကြမလဲ ဆိုတာကို အိမ်ထောင်မပြုခင်မှာ မလွဲမသွေ တွေးကြည့်မိကြမှာပါပဲ…။ ဒီတော့ကာ ကိုရွာသားလေး ၊ ကိုပီတိ ၊ ကိုတီဇက်အေ နဲ့ ကိုခမမ တို့ကို တက်ဂ်ချင်ပါတယ်။ (ဟမ်…. ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး… ဇွတ်…)
ပြီးတော့ မတက်ဂ်ပဲ ချန်ထားခဲ့တဲ့ မောင်ငယ် ညီမငယ်တွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်...။ စိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်... ကလေးတွေမို့ ဒီအကြောင်းတွေပြောဖို့ ငယ်သေးတယ်လို့ ယူဆလို့ မတက်ဂ်တာပါ...။ အကိုတွေ အမတွေ ပြောတာ အရင် နားထောင်ကြပေါ့... အိုကေ...
ကဲ… စာရေးဖေါ် စာရေးဖက် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ညီအကို မောင်နှမတွေ အားလုံးအတွက် ပျော်စရာ ဖြစ်စေဖို့ တက်ဂ်ပါတယ်…။
ခင်လို့ တက်ဂ်ပါတယ်…။ ချစ်လို့ တက်ဂ်ပါတယ်…။
ဒီတော့ အားလုံးဆီက ပိုစ့် အသစ်တွေကို မျှော်နေမယ်နော်…။
မှတ်ချက် ။ ။ အခုလို တက်ဂ်ပိုစ့်လေး ဖြစ်အောင် အကြံပေးခဲ့တဲ့ အမ မခင်မင်းဇော်ကို ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်...။
Posted by သက်ဝေ at 9:50 PM 35 comments: Links to this post
ကိုယ်တို့ မြန်မာဆိုရိုးစကားတွေမှာ အသွင်မတူ အိမ်သူ မဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ် မဟုတ်လား…။ ဒီစကားအရ အိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် လိုက်ဖက်ညီကြ၊ စိတ်သဘောထားခြင်း တိုက်ဆိုင်ကြ၊ ဓလေ့စရိုက် အမူအကျင့် အသွင်အပြင်တွေ တူညီကြလို့ စုံဖက်မိကြတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
အရင်ပိုစ့်မှာ လိုက်ဖက်ညီကြတဲ့ စုံတွဲတွေအကြောင်းကို နတ်ရေးတဲ့ ဖူးစာ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တယ်။ မနေ့က ကိုယ့်အမျိုးသားကို အဲဒီပိုစ့်က ကော်မန့်တွေ ပြန်ဖတ်ပြရင်း ညီမ ချိုသင်း နဲ့ မေ တို့ ရဲ့ ကော်မန့်တွေမှာ ပါတဲ့ မေးခွန်းကြောင့် သူ့ကို မေးကြည့်မိပါတယ်။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကရော ဘာတွေ တူတာ ရှိသလဲ လို့…။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ နောက်မှာ နှစ်ယောက်စလုံး အချိန် တော်တော်ကြာကြာ စဉ်းစားရင်း တွေဝေသွားကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ နေရာတော်တော်များများမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် ဓလေ့စရိုက် အမူအကျင့် အသွင်အပြင်တွေ၊ ဝါသနာတွေ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တာတွေချင်း မတူကြလို့ပါ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် သူက အေးချမ်းတယ်၊ စကားလဲ နည်းတယ်၊ ဘယ်အရာမဆို စိတ်အေး လက်အေးနဲ့…။ ကိုယ့်လို စိတ်မြန်လက်မြန် ပြာပြာလောင်လောင် ဘယ်တော့မှ မရှိဘူး။ ပြီးတော့ သူက ဝီရိယ ရှိတယ်၊ တခုခု လုပ်စရာရှိရင် ဘယ်တော့မှ အချိန်မဆွဲတတ်၊ ချက်ချင်းလုပ်တယ်။ ကိုယ်က တခုခုဆို အချိန်နီးမှ နောက်ဆုံးမိနစ် မရောက်ခင်အထိ အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်ဆွဲလေ့ရှိတယ်။ သူက စိတ်အေးတော့ တခုခုဆို စိတ်တိုတာ ဒေါသထွက်တာတွေ မရှိဘူး၊ ပြေပြေလည်လည်ပဲ။ ကိုယ်ကတော့လား… စနေသမီးလေ… သိတဲ့အတိုင်းပဲ။
သူက ပစ္စည်း ပစ္စယတွေ စာရွက်စာတမ်းတွေကို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် သိမ်းဆည်းတတ်တယ်၊ ကိုယ်ကတော့ တခုခုဆို အစဉ်အမြဲ ရှာမတွေ့တာရယ်၊ ပျောက်နေတာရယ်၊ မရှိတော့တာရယ်နဲ့ပဲ…။ ပြီးတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကိုယ်က အဖိုးမတန်တဲ့ အတိုအစတွေကို ကပ်သီးကပ်သတ် စုဆောင်းတတ်တယ်၊ သူက အိမ်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး လွှင့်ပစ်ချင်နေတတ်တယ်။
နောက်ပြီး စားစရာဆိုရင်လဲ သူကြိုက်တဲ့ ဆီကြော်တွေ၊ Spice တွေပါတဲ့ အရသာ နဲနဲပြင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ကိုယ်မကြိုက်သလို ကိုယ်စားတတ်တဲ့ ဖြူဖျက်ဖျက် ဆီမပါ ပြားမပါ အပြုတ်တွေကို သူ မနှစ်သက်တတ်ဘူး။ တီဗွီကြည့်ရင်လဲ သူက Documentary တွေနဲ့ သတင်းတွေ၊ National Geographic တို့၊ BBC Knowledge တို့တွေကိုသာ ကြည့်တတ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်တွေကို သူ မကြည့်ပါဘူး။ ကိုယ်က ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ မြန်မာဝတ္ထုတွေ၊ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေ လက်ကမချ ဖတ်နေတဲ့ အချိန်၊ ဘလော့ဂ်လည်ရင်း စာရေး စာဖတ်ရင်း ပျော်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူက အင်တာနက်က Yahoo News တွေ၊ ရီမုတ် ကွန်ထရိုး လေယာဉ်ပျံတွေ အကြောင်းနဲ့ အင်ဂျင်တွေ မော်တာတွေ အကြောင်း ရှာဖတ်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်က ရုံးပိတ်ရက်တွေတိုင်းမှာ Shopping တွေပဲ သွားဖို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူက လေယာဉ်ပျံတွေ ဆင်ပြီး ကွင်းကျယ်ကျယ်မှာ သွားလွှတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတတ်တယ်။ တယ်လီဖုန်းတလုံးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တနာရီကျော်ကြာအောင် စကားတွေ ဖေါင်ဖွဲ့ရင်း ကိုယ့်ဖုန်းဘေလ်တွေဟာ အမြဲတမ်း Over Limit မှာ ရှိတတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ Call List မှာ ကိုယ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ ရှိမနေတတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က အခွေဆိုင်တွေရောက်လေတိုင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ခွေတွေ၊ သီချင်းခွေတွေ လောဘတကြီး ဝယ်တတ်ပေမယ့် သူက လူသံမပါတဲ့ Richard Clayderman လို Vanessa Mae လို တီးလုံးသက်သက် အခွေတွေကိုပဲ ဝယ်တတ်ပါတယ်။
ဒါ အခုလောလောဆယ် ကိုယ်တွေးလို့ရသလောက် ရေးပြတာနော်…။ ကြည့်ပါအုံး… ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်မှာ ဘယ်နေရာလေးမှာများ တူတာရှိလို့လဲ…။ အဲဒါကို နှစ်ယောက်အတူတူ တွေးမိပြီး အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေချိန်မှာ သူက တခုပြောလာတယ်။ ဒီလို အပြင်ဖက်က မြင်နိုင် တွေ့နိုင်တဲ့ အပေါ်ယံ အကြောင်းအရာတွေမှာ အကြိုက်တွေ မတူကြပေမယ့် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်မှာ သေသေချာချာ တူတာ တခုရှိတယ်လေ တဲ့…။ အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ စိတ်ထဲက စေတနာတွေပါ တဲ့…။ ကိုယ်တို့ရဲ့ စိတ် စေတနာတွေ တူကြတယ်လေ တဲ့…။ အဲဒီစကားကို ကြားတော့ ကိုယ်တကယ် စိတ်သက်သာရာရပြီး စိတ်တွေလဲ အတော် ချမ်းသာသွားပါတယ်။ (ဘုရားရေ… တော်သေးပါရဲ့... တော်သေးပါရဲ့…)
သူပြောသွားတာ စကား တိုတိုလေး တခွန်းပေမယ့် စကားရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာတွေကို အရှည်ကြီး ဆက်တွေးနေမိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ မောင်နှမထဲမှာ အကြီးဆုံးတွေပီပီ နှစ်ဖက် မိဘ ညီအကို မောင်နှမတွေအပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး စေတနာအပြည့်နဲ့ တာဝန်ယူလိုစိတ် စောင့်ရှောက်လိုစိတ် ရှိတာချင်း တူတယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အပေါ်မှာ၊ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာတွေ တူတယ်။ ကောင်းမှုကို နှစ်သက်ပြီး မကောင်းမှုကို ဆန့်ကျင်တာခြင်း တူကြတယ်။ လိုအပ်သူကို ကူညီချင်တဲ့ နေရာမှာ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှိတာချင်းလဲ တူတယ်။ တယောက်ရဲ့ သဘောထားကို နောက်တယောက်က သိပ်မနှစ်သက်သည် ထားအုံး၊ Reasonable ဖြစ်နေတာဆိုရင် အတတ်နိုင်ဆုံး ခေါင်းညိတ်ပြီး လက်ခံပေးတတ်တာချင်းလဲ တူတယ်။ ပြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် နားလည်ပေးတတ်တာ၊ လိုက်လျောတတ်ကြတာချင်းလဲ တူပါသေးတယ်။
ဒီလို တယောက်နဲ့ တယောက် ဓလေ့စရိုက် အမူအကျင့် အသွင်အပြင်တွေ အကြိုက်တွေချင်း မတူညီကြသော်လည်း တကယ် အရေးကြီးတဲ့ ရင်ထဲက အခြေခံ စိတ်နေ စိတ်ထားတွေ စေတနာတွေ တူညီကြလို့ အခုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် လက်တွဲနိုင်တာမို့ တွေးစရာ အဓိပ္ပါယ် ကျယ်ဝန်းတဲ့ သူ့စကားကို သဘောကျပြီး အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေမိပါတယ်။
သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကို အခုလို အကျယ်ချဲ့ပြီး တွေးနေမိရာက ခဏအကြာမှာ (ထုံးစံအတိုင်း) ကိုယ့်ရဲ့ ဗီဇက ပြလာတယ်။ ပြောင်ချော်ချော် ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ သူ့ကို ကြည့်ပြီး “ဘလော့ဂ်လေး တခုလုပ်ပြီး စာလေး ဘာလေး ရေးပါလား…” လို့ ပြောမိတယ်။ ရှည်ရှည်လျားလျားတွေ ရေးနေစရာမလိုပါဘူး၊ အခုတလောမှာ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရေးကြတဲ့ ပိုစ့်တွေကလဲ ခေတ်စားနေတယ် မဟုတ်လား လို့လဲ ဆက်ပြောမိတယ်။ ဒီတော့ သူက ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ တခွန်းပဲ ပြန်ပြောတယ်…
“ကိုယ် စာရေးလိုက်ရင် ပန်ပန်တို့ သက်ဝေတို့ ထိုင်ငိုသွားရမှာပေါ့ တဲ့…”
ကဲ… ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အသွင်တူလေလား… မတူလေသလား… ကိုယ်တို့ရဲ့ ဖူးစာကို နတ်မင်းကြီးက ရေးလေသလား… မရေးလေသလား ဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကြီးပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အကဲခတ် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါတော့နော်…။ ညီမ ချိုသင်းနဲ့ မေ တို့ရဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အဖြေကတော့ သည်မျှပါပဲကွယ်…။ ကျေနပ်ကြတယ် ဟုတ်…း))
Posted by သက်ဝေ at 10:25 PM 29 comments: Links to this post
မနက်စောစောပိုင်း ဈေးဝယ်ထွက်၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီး တနေ့ခင်းလုံး ပျင်းတာရယ် နေကလဲ အတော်ပူတာရယ်ကြောင့် ဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ ငြိမ်တွေပြီး စာရေးစရာ အာရုံတွေ စုစည်းကြည့်ပါသေးတယ်။ မရဘူး… ဒါနဲ့ စိတ်ရော လက်ရော လျှော့လိုက်တယ်…။ ပြီးတော့ ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ အဆုံး ထမင်းစားပြီး အခန်းထဲမှာ စာအုပ်တအုပ်နဲ့ ဇိမ်လုပ်နေတဲ့ မေမေ့အနားပဲ သွား၊ သူဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို အတင်း လု ပိတ် ပစ်လိုက်ပြီး စာမဖတ်ပါနဲ့တော့ ပျင်းစရာကြီး… စကားပြောကြရအောင်ပါလို့ သွား အနိုင်ကျင့်လိုက်တယ်…။
ဒီလိုနဲ့ မေမေနဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းတွေ ရောက်တတ်ရာရာ ပြောရင်းက စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းလေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြသော်လည်း တခါတခါမှာ မထင်မှတ်ပဲ ခွတီးခွကျ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ လူတွေ၊ တခါတရံမှာ ရိုးသားလွန်းတော့ အရိပ်အကဲ မသိတတ်၊ အလိုက် မသိတတ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ အကြောင်း ရောက်သွားတယ်…။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ တခါတရံမှာ နတ်ဖက်တဲ့ ဖူးစာလိုပဲ တယောက်နဲ့တယောက် အကျင့်တူ၊ စရိုက်တူ၊ ပုံစံ စိတ်နေ စိတ်ထားတွေ တူတဲ့ သူအချင်းချင်း ဖူးစာ ဖက်တတ်ကြတယ်လို့ မေမေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီလို စုံတွဲတွေအနက်က မေမေပြောပြတဲ့ စုံတွဲ နှစ်တွဲအကြောင်း ပြောပြမယ်နော်…။
ပထမ တတွဲက မေမေတို့ မိတ်ဆွေ တယောက်ရဲ့ အမေနဲ့ အဖေ... အသက်အရွယ်လဲ နဲနဲကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားနဲ့ အဖိုး စုံတွဲလေးပါ။ အဲဒီ အဖွားလေးက သူ့အိမ်မှာ စပါယ်ရှယ် ယွန်းကွမ်းအစ် လှလှကြီးနဲ့ အမြဲတမ်း ကွမ်းစားသတဲ့…။ သူ့အိမ်ကို လာလည်သမျှ လူတိုင်းကိုလဲ သူ ဘယ်လောက် စေတနာတရား ထက်သန်တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ လှူတယ် တန်းတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ အမြဲပြောပြလေ့ရှိသတဲ့…။ ပြီးတော့ သူက သူကိုယ်တိုင် စီစဉ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကွမ်းယာ ဘယ်လောက် အချိုးအစား ကောင်းပြီး အစပ်အဟပ် ဘယ်လို တည့်ကြောင်းကို စကားကြုံတိုင်း ပြောတတ်သေးသတဲ့။ သူ့အိမ်ကို လာသမျှ ဧည့်သည်တွေကိုလဲ ကွမ်းယာစားချင်ရင် အချိန်မရွေး အားမနာတမ်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ယာစားနိုင်ကြကြောင်း အမြဲပြောတတ်သတဲ့…။ ဒါပေမယ့် ခက်ပုံခက်နည်းက သူက ဧည့်သည်တွေလာရင် ဧည့်ခန်းထဲမှာ အဲဒီကွမ်းအစ်ကြီးကို ခေါင်းအုံးပြီး တချိန်လုံး အိပ်နေတော့တာပါပဲ တဲ့…။
အဲ… အဖိုးလေးကတော့ စားချိန် အိပ်ချိန်လောက်ကလွဲရင် တနေ့လုံး ခြံထဲမှာ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ အချိန်ကုန်လေ့ရှိသတဲ့…။ ခြံထဲမှာက သီးပင် စားပင် နဲ့ ပန်းအလှပင်တွေ တော်တော် များများရှိတယ်တဲ့…။ သူကလဲ ခြံထဲမှာ အချိန်ပြည့် နေနေပြီး လာလည်သမျှ လူတိုင်းကို အုန်းသီး စားချင်ရင် ပြောပါ… ဘုရားပန်းကပ်ဖို့ လိုချင်ရင် ပြောနော်… ဘူးသီးနုနု လိုချင်ရင် ပြောနော်… နဲ့ လောကဝတ်တွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်တဲ့…။ သို့သော်လည်း အုန်းသီးလိုချင်လို့ မေးတဲ့သူတွေကို အုန်းပင်တက်သမား ခေါ်မရသေးလို့ လို့ အကြောင်းပြတတ်ပြီး ဘုရားပန်း တောင်းတတ်တဲ့သူတွေကို ပန်းခူးပေးဖို့ အိမ်ထဲဝင်ပြီး ပန်းညှပ်တဲ့ ကပ်ကြေးရှာနေလိုက်တာ တနာရီမက ကြာတတ်သတဲ့…။ အဲ… ဘူးသီးအကြောင်း မေးမိရင်တော့ ဘူးသီးက အရွယ်မရောက်သေးလို့ ဒါမှမဟုတ် မျိုးစေ့လိုချင်လို့ အခြောက်ခံမှာ မို့လို့ စတဲ့ ဆင်ခြေလေးတွေ မရိုးရအောင် ပေးတတ်သတဲ့လေ…။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ လူတွေလဲ အထာတွေနပ်ကုန်ပြီး နောက်ကို ဘာမှ မတောင်းလို ကြတော့ဘူးတဲ့….။ လိုက်လဲ လိုက်ဖက်တဲ့ ချစ်စရာ ရယ်ချင်စရာ အဖိုးနဲ့ အဖွားတွေပဲနော်…။
နောက်ထပ် စုံတွဲတတွဲကတော့ လူကြီးပိုင်းရောက်ကာစ စုံတွဲတတွဲပါ။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ တယောက်နဲ့တယောက် အလွန် လိုက်ဖက် တင့်တယ်တဲ့ စုံတွဲတတွဲဖြစ်တာမို့ ဟိုက ဒီက ဖိတ်ကြားတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကို အစဉ်သွားရောက် ချီးမြှင့်ရလေ့ရှိသတဲ့…။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေထဲက တခုက လဘက်သုပ် ပါတဲ့…။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့ အလှူတခုမှာ တည်ခင်းတဲ့ နေ့လည်စာကို စားအပြီးမှာ အချိုပွဲစားတဲ့ အချိန်ကို ရောက်လာသတဲ့…။ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာအလှူတွေပီပီ အချိုပွဲမှာ မပါရင် မပြီးတာက လဘက်သုပ်ပေါ့…။ ဒီတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်က သူတို့ကိုယ် သူတို့ သတိမထားလိုက်မိခင်မှာပဲ လဘက်ပန်းကန်မှာ တပ်ထားတဲ့ ဇွန်းနှစ်ချောင်းကို တယောက် တချောင်းကျစီ ကိုင်ဆောင်ပြီး တဇွန်းပြီး တဇွန်း အေးအေးဆေးဆေး သုံးဆောင်ကြလေသတဲ့…။
သူတို့နဲ့ တဝိုင်းထဲ အတူတူစားတဲ့သူတွေထဲက အမျိုးသားတယောက်က ဒီလို စားစချင့်ဖွယ် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ လဘက်သုပ်ကို သူလဲ စားချင်နေတာ… သို့သော် ဇွန်းက ဘယ်လိုမှ သူ့လက်ထဲ ရောက်မလာနိုင်၊ လက်နဲ့ ယူစားဖို့ကလဲ မဖြစ်နိုင်နဲ့ အတော် အကြပ်ရိုက်နေတာပေါ့…။ ဒါပေမယ့် သူက အင်မတန်မှ ဟာသဥာဏ် ရှိတဲ့သူဆိုတော့ လဘက်ဇွန်း သူ့လက်ထဲရောက်လာဖို့အရေး ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ဆို အကြံထုတ်ပြီး ခဏနေတော့ သူက ဒီလိုပြောသတဲ့…။
“အန်ကယ်ခင်ဗျား… အန်ကယ့်လက်ထဲက ဇွန်းက အလှူက ဇွန်း ဆိုရင်လဲ ခဏလောက် ချပါ… အန်ကယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇွန်း ဆိုရင်လဲ ခဏလောက် ငှားပါလား ခင်ဗျာ… ”
အဲဒီလို ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ပြောလိုက်တော့မှ အဲဒီ လင်မယားနှစ်ယောက်လဲ သူတို့ အပိုင်စီးထားမိတဲ့ လဘက်ဇွန်းတွေကို အသာချ၊ ဘေးနားကလူတွေရဲ့ ပြုံးစေ့စေ့ အကြည့်တွေကြောင့် ခဏနေတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ ထပြန်သွားကြလေသတဲ့…။
မေမေ့နားမှာ မေမေပြောတာတွေ နားထောင်ရင်း တခွိခွိနဲ့ ရယ်ရင်း… တဖြေးဖြေး မှေးမှေး မှေးမှေးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်…။ အခုမှ နိုးလာပြီး မှတ်မိတာလေးတွေ မေ့မသွားခင် ကမန်းကတမ်း ချရေးလိုက်ပါတယ်…။ ဒါလေးကို ဖတ်မိပြီး အနည်းဆုံးတော့ မျက်နှာကြောလေးတွေ နဲနဲရော့ပြီး တချက်လောက် ပြုံးမိသွားတယ် ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီလေ…။
မှတ်ချက် ။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က မေမေဒီမှာ ရှိနေတုန်းက ပြောဖြစ် ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ ရေးထားပြီး ဘယ်လိုက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ မတင်မိတယ် မသိဘူး။ ဒီနေ့ ကွန်ပျူတာထဲက မလိုတဲ့ ဖိုင်လ်တွေ ရှင်းရင်းက ဒါလေးကို ပြန်တွေ့လိုက်လို့ ဝမ်းသာမဆုံး တပြုံးပြုံးနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ပျော်စရာ စနေ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်များ ဖြစ်ကြပါစေ...။
Posted by သက်ဝေ at 3:00 PM 27 comments: Links to this post